(L) စိတျရငျးတစ်ဦးကမော်လီကျူး, ၎င်း၏ Task ကိုမှာ Dopamine Excel (2009)
လှုံ့ဆော်မှု? ကြွက်များသည် Cheerios, the Famous Amos, Ramen of noodle package ၃ ခုနှင့်သင်ဝယ်ခဲ့သောမုန့်၏တဆေးပါသောသေတ္တာတော်မှတစ်ဆင့်ကြွက်များနှင့်ပြproblemနာဖြစ်ပွားပြီးသင်ကြွက်များသည်သူတို့၏လမ်းကိုဝါးစားနေသည်ကိုတွေ့ဖူးပါက“ The Canyon of Ladies” သည်စိတ်သောကရောက်နေသည်၊ စားသောက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့သည့်ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များ၏အားနည်းချက်ကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်။
မောက်စား၏ကိုယ်ထိလက်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒါဟာနေဆဲအစားအသောက်၏အရသာကို likes ။ ၎င်း၏ပါးစပ်အတွင်း kibble ထား. , ကဝါးနဲ့မျို, လူအပေါင်းတို့အနေဖြင့်သိသာကြွက်စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်၎င်း၏နှာခေါင်း wriggling ပါလိမ့်မယ်။
သို့သျောလညျး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် left, mouse ကိုညစာအဘို့ကိုယ်နှိုက်ကနှိုးဆျောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လှောင်အိမ်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပန်းကန်လုံးကနေအစားအစာလုံးလေးများရုတ်သိမ်းရေး၏မျှသာအတွေးလွှမ်းမိုးသောစျြလြူရှုမှုနှင့်အတူကဖြည်။ အမှတ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစားသုံးမိခြင်းနှင့်မစင်၏, တကယ်ကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့်နှောင့်အယှက်? နေ့ရက်များ mouse ကိုစားရကြပါဘူး, ဒါကြောင့်ခဲလှုံ့ဆျောနှင့်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွင်းက, အသေသတ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကငတ်ပြီ, ဖြတ်သန်းရတယ်။ ennui ၏ကြွက်ရဲ့ဆိုးဝါးကိစ္စတွင်နောက်ကွယ်မှ dopamine တစ်ဦးပြင်းထန်လိုငွေပြမှု, ဦးနှောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်ပြမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Dopamine သည်နောက်ကျ serotonin က "" ဟုအဆိုပါ Prozac နဲ့ဧည် '' 90s ခဲ့သကဲ့သို့, ဒီနေ့ရဲ့ "က" neurotransmitter အတော်လေးဖက်ရှင်ဖြစ်လာသည်။
သေးငယ်တဲ့, ပျြောမှေ့စစိတ်လှုပ်ရှားပေးကြောင်းဘာမှ - ပြည်သူ့ချောကလက်ကနေသူတို့၏ "dopamine အလုအယက်", ဂီတ, စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်, ပေါင်ပေါ် BlackBerry ကိုဘတ်ဇ်ရတဲ့၏ပြောဆိုပါ။ Adderall နှင့် Ritalin တူသော ပို. ပို. လူကြိုက်များစိတ်ကြွဆေးလုပ်ပေးအဖြစ်ကိုကင်း, စိတ်ကြွဆေး, အရက်နှင့်နီကိုတင်းနှင့်တူဒု၏အကျွမ်းတဝင်အေးဂျင့်များ, ဦးနှောက်ရဲ့ dopamine ဆားကစ်လှုံ့ဆော်ဖို့လူသိများကြသည်။
အများပိုင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းခုနှစ်, dopamine ဆုလာဘ်အကြောင်း, ကောင်းသော feeling, တဖန်ကောင်းသောခံစားရလိုသော, သင်ထွက်မကြည့်ကြပါလျှင်, သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်မှတဆင့်ဒီလိုမြင်ကွင်းကတော့ပျော်မွေ့လိုင်းများမှတစ်ကျွန်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ဟေးအဘယျကွောငျ့သငျသညျကိုသူတို့ dopamine ခေါ်ထင်ပါသလဲ
dopamine-လစ်လပ်ကြွက်အပေါ်သစ်ကိုသုတေသနများနှင့်အခြားလေ့လာမှုများထုတ်ဖေါ်အဖြစ်သို့တိုင်ဦးနှောက်၌အကြှနျုပျတို့၏နည်းနည်း Bacchus အဖြစ် dopamine ၏ပုံသဏ်ဌာတစ်ဦးအာရုံကြောပျော်ရွှင်မျက်နှာအဖြစ် serotonin ၏ယခင်ရုပ်ပြောင်ခဲ့သကဲ့သို့, အထင်အမြင်မှားစေဖြစ်ပါတယ်။
ချီကာဂိုအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးများအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာစိတျအပိုငျးတှငျဆှေးနှေးပေါ်ပေါက်လာသောမြင်ကွင်းမှာတော့ dopamine သင်ကလုပ်နေတာပြီးတော့ရှင်သန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထွက်ရှာဖွေအကြောင်းကို, Drive နှင့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့် ပတ်သက်. ထက်အပျော်အပါးနှင့်ဆုလာဘ်အကြောင်းကိုလျော့နည်းသည်။ "သင်အသက်ရှူလို့မရဘူး, သင်လေ gasping နေတဲ့အခါ, သငျသညျပျြောမှေ့စကြောင်းကိုခေါ်မလဲ" နိုရာဃ Volkow, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု၏ dopamine သုတေသီနှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "သင်တို့၌ရွံရှာဘွယ်အရာတစ်ခုခုကိုစားသောကြောင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသည့်အခါသို့တည်းမဟုတ်သောပျြောမှေ့စဖြစ်သနည်း"
နှစ်ဦးစလုံးတုံ့ပြန်မှုခုနှစ်တွင်ဒေါက်တာ Volkow က, အောက်စီဂျင်နှင့်သင်သာမန် spurn မယ်လို့တစ်ခုခု၏ဆင်း Wolf များအတွက် gasping, ဦးနှောက်၏ dopamine လမ်းကြောင်းအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာမှာရှိပါတယ်။ "ဒီမြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက်တဦးတည်းအတွေးအခေါ်များ၏ဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ "ဒီပြင်းထန်သော drive ကိုဆင်းရဲချို့တဲ့တဲ့ပြည်နယ်ထဲကသငျသညျအရအသကျရှငျသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ "
Dopamine လည်းဦးနှောက်ရဲ့ salience filter ကို၎င်း၏ get-a-ဝန်-of ဒီကိရိယာကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "သင်အရာအားလုံးကိုအာရုံစိုက်လို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကဝတ္ထုဖြစ်ကြောင်းအမှုအရာအသိအမှတ်ပြုမှာသက်ရှိအဖြစ်အစွမ်းဖြစ်ချင်တယ်" ဟုဒေါက်တာ Volkow ကဆိုသည်။ "သင်အခန်းထဲမှာတစ်ဦးယင်ကောင်သတိပြုမိမပြုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ယင်ကောင်ချောင်းကြီးလျှင်, သင်၏ dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်လိမ့်မယ်။ "
ကျွန်တော်လိုခငျြတ္ထုများနှင့်ကျနော်တို့ကိုကွောကျရှံ့အရာဝတ္ထု: ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ dopamine-မောင်းနှင် salience detector အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး imbued ပြီအကျွမ်းတဝင်တ္ထုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ချောကလက်ချစ်ကြလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dopamine အာရုံခံအများဆုံးဖွယ်ရှိကောင်တာပေါ်လဲလျောင်းနေတဲ့ pert နည်းနည်းချောကလက် bean ကို၏မျက်မှောက်မှာမီးစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပိုးဟပ်ကိုကွောကျရှံ့ပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် "bean ကို" ခြောက်လခြေထောက်ရှိကြောင်းသတိထားမိသောအခါမူကားထိုတူညီသောအာရုံခံပင်ခက်ခဲပစ်ခတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် se နှုန်းချောကလက်၏ပျြောမှေ့စအရသာ, သို့မဟုတ်ပာပ် phobia များ၏စိုးရိမ်စိတ်, ကောင်းစွာ opiates သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကဲ့သို့အခြားအချက်ပြမော်လီကျူး၏လက်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ Dopamine ရိုးရှင်းစွာလျစ်လျူရှုဖို့သက်ဆိုင်ရာအရာဝတ္ထုနီးပါးမဖြစ်နိုင်စေသည်။
ဦးနှောက်ကမဟုတ်ရင်သတိထားမိလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုလစျြလြူရှုချင်သင့်တယ်, dopamine muzzled ရမည်ဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံများတွင်မကြာသေးမီကအစီရင်ခံနယူးယောက်တက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ Regina အမ် Sullivan က, Philadelphia တွင်ကလေးဆေးရုံ၏ဂေါ်ဒွန်အေဘားနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် 12 ရက်ပေါင်းထက်အသက်ကြီးတဲ့ကြွက်လျင်မြန်စွာနှင့်အတူတွဲခဲ့ဆိုအနံ့တစ်ခုခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့သော်လည်း, တွေ့ရှိခဲ့ တစ်ဦးပျော့လျှပ်စစ်ရှော့ခ်သည့်သင်ခန်းစာ jolt ကိုအပ်သောအခါ၎င်းတို့၏မိခင်များအနီးအနားဖြစ်လျှင်, ငယ်ရွယ်ကြွက်မတရားထိုကဲ့သို့သောအနံ့တစ်ခု preference ကိုပြသလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသုတေသီများကွောကျရှံ့သောအမှတ်တရများမွေးဖွားကြသည်ရှိရာ amygdala အတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖိနှိပ်မှုမှမွေးကင်းစကလေးများကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဝိညာဉျကိုခြေရာခံ။ မွေးကင်းစကလေးကြွက်အနံ့အားဖြင့်သူတို့ရဲ့မိခင်ကိုသိဒေါက်တာ Sullivan ကရှင်းပြခဲ့, သူတို့သည်ပင်တစ်ကြမ်းတမ်းအိမ်စောင့်အဘယ်သူအားမျှထက် သာ. ကောင်း၏အဘို့, သူမ၏ရှောင်ရှားရန်သင်ယူမပြုရပါ။
ယင်း၏သက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အကြီးစား, dopamine တဦးတည်းအဆုံးမှာဝိသေသနိုက်ထရိုဂျင် Amin ဖုနှင့်အတူ, 22 အက်တမ်၏တညျဆောကျတဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်လီကျူးဖြစ်ပါသည်။ (Dopamine, လမ်းဖြင့်၎င်း၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုထံမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူလျက်, စကားလုံး dope နဲ့ဘာမှရှိပါတယ် - ဘိန်းဖြူများသို့မဟုတ်အခြားအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများ၌ရှိသကဲ့သို့ - စွပ်ပြုတ်ဘို့ဒတျချြအသုံးအနှုန်းကနေရယူထားခြင်းမှထင်သော။ )
အဆိုပါ dopamine ထုတ်လုပ်မှု Corps အဖြစ်ကောင်းစွာအလွန်သေးငယ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအာရုံခံ၏ 1 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်နည်းပါးလာ, ထိန်းချုပ်မှုလှုပ်ရှားမှုကိုကူညီပေးသည်သော substantia nigra ကဲ့သို့ midbrain အဆောက်အဦများအတွက်သူတို့ထဲကအများစုက neurotransmitter generate; ကတုန်တုန်ယင်ယင်နှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ၏အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေအတွက်ရလဒ်များကြောင့် dopamine ဆဲလ်၏ဤလူဦးရေ၏ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ညာနဖူးနောက်ကွယ်မှရပ်ထားသည့် prefrontal cortex အတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုပိုမိုမြင့်မားထ, storylines ရေးထားလျက်ရှိ၏ဘယ်မှာကြီးအလုပ်အမှုဆောင်ဦးနှောက်, Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ဆင်ခြေ contrived လည်းရှိပါသည်။ prefrontal dopamine တစ်ခုဆင်းရဲမွဲတေမှု schizophrenia အထောက်အကူပြုဖို့စဉ်းစားထားသည်။
နေရာတိုင်းကသူတို့ရဲ့ဘူတာရုံ, ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ dopamine ပေါ်သို့ lock နှငျ့အညီတုံ့ပြန်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပရိုတိန်း, သူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်မှတက်ဥိးငါးခုကွဲပြား dopamine receptors တစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမှတဆင့် dopamine များလွှတ်ပေးရန်တုံ့ပြန်ကြသည်။ နောက်ထပ် key ကိုကစားသမား dopamine ပို့ဆောင်ရေး, အသုံး dopamine မော်လီကျူးကိုယူလိုက်တယ်ပြန်သူတို့မွေးဖွားခဲ့ရှိရာဆဲလ်သို့သူတို့ကိုငါချင်းနှင်းကြောင်းတံခါးစောင့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုကင်းများကဲ့သို့အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများ dopamine အဆိုပါအာရုံခံအိမ်တော်ထဲမှာနေရစ်နှင့်တစ်လျှောက်၎င်း၏ signal ကိုရှုပ်နေခဲ့သည်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြု, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။
လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ dopamine အာရုံခံစည်းချက်ညီညီပစ်ခတ်ရာမှာ tonal နောက်ခံအရှိန်အဟုန်, ဆဲလ်လိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်သတင်းတုံ့ပြန်နှုန်းကိုမြင့်တက်ရာနှင့်အတူ avid ထဲမှာ, dopamine matrix ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမွတ်ဆလင်မှာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်ကွဲပြားနှင့်ဆဲလ် hyperstimulated ရာနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်အခြေခံမှပြန်ပြောင်း ။
တချို့ကသုတေသီများကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကွဲပြားမှုမှသဲလွန်စအဘို့အဲဒီ receptor အမျိုးအစားများအတွက်မျိုးဗီဇမူကွဲကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ Northwestern University ၏ဒန်က TA Eisenberg ၏အဆိုအရသိပ္ပံပညာရှင်များ dopamine အဲဒီ receptor အမှတ်4တစ်အတော်လေး elongated အဗားရှင်းနှင့်တစ်ဦး Impulse နှင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူဆီသို့စိတ်သဘောထား, အထူးသဖြင့်ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအကြားတစ်ဦးကျိုးနွံ connection ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
တဦးတည်းအမူအကျင့်မျိုးဗီဇတွင်ဤပဏာမဆက်စပ်မှု၏အလွန်အကျွံလုပ်လို့မရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်အာမခံငွေများမတိုင်မီကျနော်တို့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအန္တရာယ်များ long-form ကို receptors ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဘို့စမ်းသပ်တောင်းဆိုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာစီးပွားရေး, dopamine ပါပဲ။
NATALIE ဒေါသဖြင့် New York Times ကို
dopamine နှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ ဒီမှာ.